Nsogbu egwuregwu | September 2019
Software maka ịme egwuregwu 2D / 3D. Kedu esi mepụta egwuregwu dị mfe (ihe atụ)?
Ndewo Egwuregwu ... Ndị a bụ otu n'ime mmemme kachasị ewu ewu nke ọtụtụ ndị na-azụ kọmputa na kọmpụta. Eleghị anya, PC agaghị adịwanye mma ma ọ bụrụ na ha enweghị egwuregwu. Ma ọ bụrụ na mbụ, iji mepụta egwuregwu ọ bụla, ọ dị mkpa ịnweta ihe ọmụma pụrụ iche na usoro mmemme, ịbịaru ụdị, na ihe ndị ọzọ.
11 kaadị FIFA 19 na ndị egwuregwu na-ahọrọ ọtụtụ mgbe
FIFA 19 - ihe egwuregwu egwuregwu kachasị ewu ewu nke na-eme ka ndị na-eme egwuregwu na-ekele ọrụ na-adọrọ adọrọ na nke na-eri ahụ n'Ịntanet. Ka ọ na-erule ngwụsị afọ 2018, ndị egwuregwu jisiri ike na-etinye ọtụtụ narị nde ịlụ ọgụ na mpaghara ndị gụrụ oghe, na-eji emem dị iche iche. Otú ọ dị, na obodo ndị na-egwu egwu, enwere ike ịme ụfọdụ ndị egwuregwu maka ọnọdụ ọ bụla.
Steam_api.dll na-efu ("steam_api.dll na-efu na kọmputa gị ..."). Ihe ị ga-eme
Ezi ụbọchị. Echere m na ọtụtụ ndị na-egwu egwuregwu maara nke ọma na usoro Steam (nke na-enye gị ohere iji ngwa ngwa zụrụ egwuregwu, chọta ndị nwere mmasị na igwu egwu n'ịntanetị). Anyị ga-atụle isiokwu a gbasara otu njehie na-ewu ewu na enweghị ntinye faịlụ steam_api.dll (otu ụdị njehie dị na fig.
Ọtụtụ ndị na-enwe mmasị igwu egwu egwuregwu na-akpali mmasị ma dị mma. Taa, nnukwu ewu ewu abiala na egwuregwu Steam, nke kachasị mma n'ime ha bụ nke dị n'elu 10. Ihe APB weghachite TrackMania Pathway Exile Track For Exhibitors Team Forward Ke egwuregwu ị ga-ekere òkè na ọgụ PvP dị ike, ịlụ ọgụ maka ọdịiche nke òtù ahụ, nweta otu ụlọ ọrụ dị iche iche .
Egwuregwu egwuregwu na-akpali ndị ọrụ maka ogologo oge nke egwuregwu, na asọmpi na-eme ka ha na-azụ nkà ha na-egosi na ha elu karịa ndị ọzọ. Mgbe ụfọdụ, ndị na-egwu egwu na-achọ ọ bụghị nanị na ha ga-abụ ndị kachasị mma, kamakwa iji lee anya na egwuregwu ahụ, nwee ngwá agha pụrụ iche ma ọ bụ ọhụụ onwe onye ọ dịghị onye ọzọ nwere.
Studio Ubisoft kọwara n'ụzọ zuru ezu usoro chọrọ maka egwuregwu ahụ Nkeji 2. Ndị mmepe bipụtara aha nke components maka egwuregwu ahụ na 1080p na 30 na 60 FPS, yana maka egwuregwu 60 FPS na 1440p na 4K mkpebi. Ndị na-eme egwuregwu ga-eji Windows 7 na nke ọhụrụ. Maka ugboro 30 nkeji na foto Full HD, AMD FX-6350 ma ọ bụ Core i5-2500k dị mma dịka nhazi.
Ndị mmepe nke FIFA 19 site na EA studio na-enye ndị egwuregwu nke narị afọ nke iri abụọ na atọ n'izu. Ndị dike nke izu gara aga rutere ya, ha jisiri ike mee ka ha nwee mmeri n'ọgba egwuregwu ụlọ. Ihe ndị mejupụtara izu nke iri abụọ nke izu FIFA 19 Onye na-elekọta ụlọ Central na-agbachitere N'aka aka ekpe Nri aka ekpe Central midfielders N'aka ekpe aka nri N'ihe nkwụsịtụ Nkeji nke izu nke iri abụọ nke izu FIFA 19 - Onye nche Ụlọ ọrụ nke izu ụka bụ Jan Cloud.
Top 10 egwuregwu kacha mma maka Xbox 2018
Egwuregwu kacha mma na Xbox One na 2018 nyere ndị ọrụ ohere ịga ogologo njem iji chọpụta akụ na-abaghị uru, ịghọ ndị na-enyere aka sheriff n'ịchọpụta ihe dị mgbagwoju anya, na ịbaba n'ime udo - ịghọ ndị ọrụ ugbo dị mfe ruo oge ụfọdụ, ndị na-abụghị nanị na-akụ mkpụrụ n'onwe ha, kamakwa ha na-ere ya onwe ha.
O mere na ihe oyiyi nke ihe ngosi kọmputa na-ejikọkarị ya na onye dị afọ iri na ụma ma ọ bụ nwa okorobịa na-agbachitere n'ụlọ mgbe ọ na-enweghị ohere ọ bụla, nke ọ na-etinye na ndị na-agba égbè, usoro na RPG n'ịntanetị. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na ndị inyom nke afọ dị iche iche adịghị eji egwuregwu kọmputa egwu.
Ezi ụbọchị. Echere m na ihe egwuregwu ọ bụla (ọ dịkarịa ala, nwee obere ahụmahụ) maara ihe FPS bụ (ọnụ ọgụgụ nke okpokolo agba kwa nke abụọ). Ma ọ dịkarịa ala, ndị na-eche brakes na egwuregwu - ha maara n'ezie! N'isiokwu a, m chọrọ ịtụle ajụjụ ndị kachasị ama gbasara ihe ngosi a (otu esi amata ya, otu esi emewanye FPS, ihe ọ ga-abụ ma ọlị, ihe kpatara ya ji adabere na ya.
2018 Afọ nyere ụlọ ọrụ na-egwu egwu ọtụtụ ọrụ na ọrụ mgbanwe. Otú ọ dị, n'etiti egwuregwu ndị ahụ na-ekwe nkwa bụ ndị na-enweghị ike inye ndị na-egwu egwuregwu aka. Nnyocha ndị a na-akatọ na ndị na-adịghị mma na-adaba dịka ọka, ma ndị mmepe gbalịrị ime ngọpụ na ime ka ihe ha kere dị ọcha.
Ndị mmepe etinyewo ọtụtụ ihe na-adọrọ mmasị maka ọnwa ikpeazụ nke mgbụsị akwụkwọ. Otu n'ime egwuregwu kachasị atụ anya nke November 2018 bụ egwuregwu arụ ọrụ, ndị na-agba égbè, ndị na-eme ihe nkiri, na ihe nkiri. Site n'enyemaka ha, a na-eburu ndị na-eme egwuregwu gaa na mbara ala dị anya, na ụwa egwuregwu na n'oge ndị ọzọ. Isiokwu Ndị dị na ya Top 10 Ihe kachasị anya November 2018 Egwuregwu Egwuregwu V Fallout 76 Hitman 2 Underkorld Spyro Reign Spyro 11-11: Memories Retold Top 10 Ọtụtụ na-atụ anya Games November 2018 Ụfọdụ n'ime egwuregwu ndị a na-echere ogologo oge ugbua.
EA gosipụtara na otu narị izu nke izu n'izu simulator nke FIFA 19. Ndị na-egwu egwu na-egosi onwe ha n'egwuregwu nke ọma na-enweta ebe dị iche iche na otu kaadị ka mma maka ọnọdụ Team Ultimate. Ònye na maka uru dị na TOP-11 wee banye n'ogo oge a? Ihe di n'ime iri abuo ndi egwuregwu FIFA iri abuo 19 Onye nche nchebe nke ndi ozo Ogugu aka ekpe Nkuku aka nri Central center midfielder Left winger Right winger Striker Top Player of XX team FIFA 19 - Onye na-elekọta Goalkeeper Nice Argentinian Walter Benitez.
Ọnụ ego na ụwa nke tank tanks na March 2019
Ịgba ntụrụndụ na-abịa na njedebe, ndị mmepe na Wargaming agwakọtawo ihe ndị a site na ịchọpụta ndị alaka nke tankị ga-etinye aka na March 2019. Ahịa na ngwá ọrụ aghọwo ọdịnala dị mma na World of Tanks. N'ọnwa gara aga, ndị na-eme egwuregwu nwere afọ ojuju maka ala T110E4 na AMX 13 105.